01 / 01 / 2013 | RayHaber | raillynews
Maalin: Janaayo 1, 2013
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Recep Altepe, Talyaani iyo Poland oo ku taal Bursa, kaabayaasha tareennada xawaaraha dheereeya leh ayaa soo sheegay in waxsoosaarka la sameyn doono. Isagoo cadeeyay inay hadafkoodu yahay inay magaalada ka dhigaan astaan ​​iyagoo adeegsanaya dhammaan qiimayaasha Bursa muddadan sida ugu wanaagsan. [More ...]
Nidaamka Tareenka ee Bursa wuxuu calaamadeeyn doonaa sanadka 2013
2013 waxay noqon doontaa Sannadka Nidaamyada Tareenka ee Bursa Iyadoo ujeedku yahay in Bursa laga dhigo magaalo caalami ah oo caan ah, 4 ayaa ku dari doonta daalado cusub silsiladeeda maalgashiga. [More ...]
Xakamaynta xakamaynta gawaarida iyo darawallada ku dhexjirta
Alfa romeo waa soo saare baabuur Talyaani ah. 1910 wuxuu bilaabay wax soo saar leh warshad laga aasaasay magaalada Milan, Italy. Astaantu waxay soo saartay noocyo badan oo baabuurta dhulka ah. Gawaarida noocan ah sida trolleybus minibus automobile van. xnumx'l ah [More ...]
1 Janaayo 1920 Railway Battalion waxaa laga aasaasay Yaxyahan. Guutada waxaa loo diray Eskişehir iyo Afyon iyo daadgureynta Eskişehir iyadoo ciidankii lagala wareegayo Sakarya ee dagaalada Kütahya oo hubiya mashiinka 20 iyo gaari xNUMX. Cunto kariye 500 [More ...]
Alsancak Xarumaha Geedaha ee Flower
Ubaxyadu had iyo jeer waxay ahaayeen muujinta jacaylka aan loo baahnayn. Sababtaas awgeed, waxaa loo isticmaalaa dhammaan qaybaha nolosha oo marmarka qaarkood waxaa loo isticmaali karaa hadiyado, mararka qaarkood hambalyo ama raali gelin. Waxa muhiimka ah waa in mid kasta [More ...]
Maxay yihiin sifooyinka aluminium Sigma Profile?
Astaanta aluminium sigma oo ah meesha ugu horeysa ee qalabka loo adeegsado sida ugu dhibka badan ee mashaariicda dhismaha maanta waa la door bidaa gaar ahaan dhismaha qaab dhismeedka birta iyo mashaariicda dhismaha. Halkan waxaa aad looga doorbiday [More ...]
45 x 90 Sigma Profile Nalalka Nalka
Isticmaalka borotokoolka sigma waa mid aad caan ugu ah badeecadaha astaan ​​u gaarka ah ee la doorbido ee kordhinta cimri dherer iyo cimri dherer. Thanks to qaabkeeda gaarka ah, waxay si wax ku ool ah u gudan kartaa xitaa markay jiraan awood sare. Guud ahaan [More ...]
45 45 Cilmi-baarista Sigma Xagee loo isticmaalaa?
Waxaa jira cabirro badan oo kala duwan iyo astaamo muujinaya profiles la soo saaray iyadoo la kaashanayo tikniyoolajiyadda. Kuwaas waxaa ka mid ah taxanaha khafiifka ah ee qaab dhismeedka jidhka khafiifka ah ay yihiin kuwa ugu badan [More ...]
30 30 Xayeysiisyada Sigma
Profile sigma 30 × 30, oo lagu doorbiday shaqooyinka dhismaha yar ee ay sabab u tahay cabbirkeeda, waxaa badanaa adeegsada shirkadaha heerarka kala duwan ee wax soo saarka. Intii lagu guda jiray soo saarida mashiinadan inta lagu gudajiray dhismayaasha faaryada iyo [More ...]
Maalmahan, dadku waxay ku raaxeystaan ​​daawashada ciyaaraha gudaha guriga halkii ay aadi lahaayeen garoomada cimilada qabow. Dadka, gaar ahaan horumarinta tikniyoolajiyadda internetka ujeeddadan iyada oo lagu soo bandhigayo bogagga internetka nolosheena [More ...]
cabbirrada astaanta caymiska iyo codsiyada
Si loo helo xoogga xoogga sare ee la doonayo ee soosaarka iyo marxaladaha isticmaalka ee agabyada sida aadka ah looga isticmaalo dhinacyada dhismaha iyo waxsoosaarka, Taxanaha Profile Sigma [More ...]
In kasta oo la sameynayo astaan ​​guud, faahfaahinta sida qaabkan loo adeegsan doono ee mashruucu waa la baarayaa isla mar ahaantaana waxaa la hubiyaa in astaamaha lagu sii wado in la soo saaro si ay uga soo baxaan filashooyinka isticmaalkooda mashaariicdan. Waxay kuxirantahay tan [More ...]
Waa maxay Noocyada Noocyada Sigma?
Wixii ka dambeeya isticmaalka shaqsiyeed, astaamaha 'sigma', oo loo isticmaalo qiyaasaha yar yar iyo mashaariicda dhismaha miisaanka birta leh iyo marxaladaha soosaarka mashiinka, waxaa ku jira alaabooyin badan oo buuxin kara baahida shaqsiyaadka. [More ...]
Iskudhufka ubaxyada iyo ubaxlayaasha
Luul of badda Aegean waa gobolka ay ku yaalliin noocyada ubaxyada badankood ee leh airzmir hawo iyo cimilo. Sababtoo ah meesha ay juquraafi ahaan ujirto, qoyaan ka badan iyo xagaaga abaarta u adkaysata xilligan ayaa lagu koray. Midda jilicsan [More ...]